Shacab, askar iyo ajaanib ku dhintay qaraxii ka dhacay Muqdisho iyo Cumar Filish oo ka war bixiyey – Hornafrik Media Network
Waxaa weli isa soo taraya khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxii is-miimaadiinta ahaa ee saakay ka dhacay isgoyska Ex-Koontarool Afgooye ee laga soo galo magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 15 ruux oo iskugu jiray shacab askar iyo dad ajaanib ah, sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah labo Injineer oo Turki ah iyo seddex askari oo ilaalo u aheyd, kuwaas oo la socday gaari la sheegay inuu ahaa nooca aysan xabaddu karin oo marayey goobta.
Wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa gaariga ay la socdeen Injineerada Turkiga ah ee u socday halka uu marayo dhismaha ku socda wadada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye , waxaana sidoo kale meesha ka agdhow xarun canshuuraha looga qaado gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo gobolka Shabeellada Hoose.
Khasaaraha ugu badan ayaa waxaa uu soo gaaray dad shacab ahaa oo isugu jiray arday Jaamacadeed oo la socday gaari Bus- ah iyo kuwa kale oo lasocday gaadiid BL ah, halka ay goobta taagnaayeen gaadiid laga qaadayey canshuur.
Dhamaan gaadiidkii iyo goobihii ganacsi ee ka ag dhawaa goobta ayaa burburay waxaana wax yeelo badan soo gaartay dadkii ku sugnaa halkaas oo iskugu jiray shacab iyo askar. Weli saraakiisha ammaanka ee dowladda Soomaaliya faah-faahin rasmi ah kama bixin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaas.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo gaaray goobta uu qaraxaasi ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in tarada rasmiga ah ee dhimashada aan wali la ogeyn, balse dhaawacyada loogu sheegay dad kor u dhaafaya 90 qof, isagoo balan qaaday in tirada dadka halkaas ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ay warbaahinta la wadaagi doonaan.
Tan iyo markii la bilaabay dhismaha waddada Muqdisho iyo Afgooye waxaa waddadaan ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu qaaday Injineerada dhisaya waxaana sheegatay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo marar isku dayday inay is hortaagto dhismaha wadadaas oo muhiim u ah isku socodaka Muqdisho iyo Shabeellada Hoose.
Al-Shabaab oo dad ka soo afduubtay gudaha Kenya